Moa ve manaraka ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny etika ny haino aman-jery sosialy? | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 25, 2014 Douglas Karr
Fitsipi-pifehezana amin'ny haino aman-jery sosialy… Mahatonga ahy hisolelaka ilay fiteny. Toa misy foana ny manandrana mametraka andiana fitsipika amin'ny zava-drehetra ankehitriny sy Tsy tantiko izany. Mazava ho azy fa misy fihetsika tsy ekena amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet… fa ny hatsaran'ny sehatra dia ny fanarahanao na tsia ilay antsoina hoe fitsipika, ho hitanao ny valiny.
Ity misy ohatra iray… Manaraka mpanome tolotra mailaka goavam-be ao amin'ny Twitter aho ary indroa izy ireo no nanao DM ahy tamin'ny dokambarotra matavy ho an'ny kaonferansa ho avy. Tsy nampoiziko ilay dokam-barotra ary tsy nomeko alalana hanaovana dokambarotra, noho izany dia azo lazaina fa SPAMMED no nampiasain'izy ireo tamiko - karazana mampihomehy. Ny olona sasany dia mety nikiakiaka tamin'ny famonoana olona feno rà satria ny orinasa iray izay nifototra tamin'ny varotra mifototra amin'ny fahazoan-dàlana dia nametraka zavatra tao amin'ny boaty Twitter an'ny olona rehetra izay tsy nangatahiny. Tsy nitaraina aho fa tsy niraharaha ilay dokam-barotra fotsiny.
Ary nanontany tena aho avy eo… mety ve izany? Raha toa ka nahavita nanova mpanaraka sasany ny orinasa voarohirohy tamin'ny alàlan'ny fanosehana an'io SPAM io ary tsy nisy ny fitarainana na ny olona nanara-dia azy, nisy vokany ve izany? Izany no olana amin'ny fitsipi-pitondran-tena, mampihatra fitsipiky ny lalàna izay tsy nifanarahan'iza na iza hitantana olana mety tsy misy. Tsy manaraka ny fitsipi-pitondrantena aho, ary tsy hanaraka izany mihitsy. Manaraka ny fitsipiko manokana aho ary afaka manaraka ahy am-pifaliana ny olona na esory aho araka ny fanirian'izy ireo (ary maro amin'izy ireo no manao izany!).
izany infographic avy amin'ny TollFreeForwarding mametraka ny sehatra ara-tsosialy tsirairay sy ny etikety izay miaraka aminy. Na mila miady amin'ny tenifototra Twitter sy Instagram ianao na manamboatra ny loharano ao amin'ny Pinterest, araho ireo fitsipika ireo dia ho hitanao fa manaraka tsara sy mahafa-po anao ny fiaraha-monina!
Tsy mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondrantena afaka manome orinasa misy fitrandrahana bebe kokoa ary, angamba, vokatra tsara kokoa. Inona ny hevitrao?
Tags: Facebooketikety facebookGoogle PlusGoogle +google + etiketyLinkedInetikety mifandrayPinterestetikety pinterestfitsipiky ny media sosialyfomba fanao tsara indrindra amin'ny media sosialyfahalalam-pomba amin'ny media sosialyfomba fanao tsara indrindra amin'ny etika media sosialylalànan'ny media sosialyTwitteretikety ao amin'ny twitter
57% ny olona tsy manome soso-kevitra anao satria…
Sep 6, 2014 amin'ny 1: 31 AM
Ya, nahafinaritra ahy ny namakivaky ny infografikao ary koa ny fampahalalana betsaka !!
Ary misaotra anao aho nizara ny lahatsoratra taminay !!